Ingqungquthela yokuqala yabathengisi beSinocare Ebanjelwe ngempumelelo eDelhi-News-Sinocare
Ingqungquthela yokuqala yabathengisi beSinocare Ebanjelwe eDelhi
Isikhathi: 2019-08-16 Hits: 320
Ngo-Mashi 2-3, 2019, ingqungquthela yokuqala yabathengisi be-Sinocare yethulwa eDelhi njengoba bekuhleliwe. Njengengxenye yesifiso sikaSinocare sokwandisa imakethe yaphesheya kwezilwandle e2019, lolu qeqesho loku-oda luqukethe umqondo walo wokuthuthuka "wokukhula ngokuzikhandla, nokuhlola imakethe ngokuzinikela" ngo-2019 ukuthatha izinyathelo eziphelele kusuka kubukhulu obuningi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni kumakhasimende aphesheya kwezilwandle futhi unikele ngokuqinile ukuzethemba kozakwethu baseNdiya.
Le ngqungquthela inezingxenye ezimbili: ukuqeqeshwa kwabathengisi, kanye nomhlangano wabalingani babathengisi.
Ngesikhathi sokuqeqeshwa kwabathengisi, iqembu le-bio-Sinocare elalimelwe nguDkt Cai Xiaohua, oyi-Chief Scientist of Sinocare, noMnu Xiang Bo, uMqondisi Wezentengiso Zamazwe Omhlaba waseSinocare, babelane namaqembu athengisa ama-elite aseNdiya mayelana nokuhlelwa kwemikhiqizo yenkampani, ukuhlaziywa komkhiqizo, imibono yomkhiqizo nohlelo lokuthuthukisa imakethe ukuze bakwazi ukuthengisa kangcono imikhiqizo emakethe futhi banikeze ngezinsizakalo ezingcono emva kokuthengisa.
Emhlanganweni wabalingani babathengisi, umkhiqizo oyinhloko wenkampani - iSafe AQ Smart, ithole ukuthandwa okukhulu ngabenzeli baseNdiya nabalingani ngenxa yekhwalithi enhle kakhulu. Ngemuva nje kwehora elilodwa kukhishwe inqubomgomo yokuthengiswa kwama-ejenti, ithole ama-oda angaphezulu kwali-10 abalelwa ngaphezulu kwamarandi ayizigidi eziyi-15 aseNdiya.
Njengamanje, i-India inabantu abangaphezu kwezigidigidi ezi-1.3 kanti inani labantu abanesifo sikashukela lidlula izigidi ezingama-75. Ngemuva kweminyaka emihlanu yentuthuko eNdiya nguMnyango Wezentengiso Wamazwe Ngamazwe waseSinocare, ukusebenza kwayo kokuthengisa kuye kwaphindwa kabili. Ngakho-ke, sekube yingxenye ebalulekile yebhizinisi lemakethe yamazwe omhlaba.
Ebhekene nenani elikhulu labantu abanesifo sikashukela eNdiya, iSinocare izohlala igcwalisa isibopho sayo senhlalo ukwethula imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezixazululo eNdiya, futhi ibambe iqhaza layo ekuvikeleni nasekwelapheni isifo sikashukela.
Ikhasi Langaphambili: USinocare waya eMEDICAL FAIR THAILAND 2019
Ikhasi elilandelayo: Ukubambisana kuka-2018 Sinocare no-YUELU SUMMIT 2018